तपाईंले आफ्ना बच्चाको व्यवहारमा फरक पाउनुभएको छ भने सावधान ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौँ । तपाईंले आफ्ना बच्चाको व्यवहारमा फरक पाउनुभएको छ ? छ भने सावधान हुनुहोस्, उनीहरूलाई बेग्लै खालको मानसिक समस्या पनि हुनसक्छ । त्यसलाई मनस्थिति परिवर्तन अर्थात् ‘मुड स्विङ’ भनिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यो बच्चाको मानसिकतासँग जोडिएको समस्या हो । अभिभावकलाई आफ्नो बच्चाको यस्तो मनोवृत्तिबारे थाहा छ तर के भएको, उपचार के छ ? यसबारे भने थाहा नभएका कारण पनि कतिपय अभिभावक दिक्क मान्ने गर्छन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. रवि शाक्यले बच्चाहरूमा छिनमै रिसाउने, हाँस्ने, भनेको नमान्नेजस्ता समस्या भएमा ‘मुड स्विङ’ हुनसक्ने जानकारी दिए। कतिपयले यस्ता बच्चालाई तह लगाउन गाली गर्ने, डर देखाउने वा कुट्ने गर्छन् तर यस्तो नगरी समयमा नै उपचार गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
“अभिभावकले बच्चालाई कुटेर र तर्साएर समस्याको हल हुँदैन,” उनले थपे, “हल नहुने मात्र होइन, त्यसले गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ ।” जानकारका अनुसार समस्या बच्चाको होइन, अभिभावकको पनि हुनसक्छ ।
अभिभावकले नै बच्चाका यस्तो मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । बालमनस्थितिलाई त्यसै रूपमा व्यवहार नगरी मेसिन वा यन्त्रका रूपमा व्यवहार गर्दा बालबालिकामा बारम्बार मनस्थिति परिवर्तनको समस्या आउन सक्छ ।
डा. शाक्यका अनुसार आमाको दूध नछाड्दै उनीहरूलाई शिशु कक्षामा पु¥याइन्छ । एक कक्षामा पुग्दा नपुग्दै उनीहरूलाई ट्युसन कक्षामा भर्ना गरिन्छ । कोचिङमा पठाइन्छ । खेल्ने, रमाउनेभन्दा पनि आमाबुवाको इशाराअनुसार चल्ने भएका कारण यस्तो समस्या देखेको उनले बताए ।गोरखापत्रमा खबर छ ।
काठमाडौं । लगातार उकालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा आज पनि सुधार आएको छ । नेपाल स्टक एक्सेचञ्जका अनुसार कारोवार […]
साउदीमा बिचल्ली परेकाको उद्धार गर्न पहल सुरु
साउदी अरब, रोजगारदाता कम्पनीले काम गरेको तलब नदिँदा साउदी अरबमा बिचल्ली परेका नेपाली कामदारको उद्धारका लागि […]
डडेल्धुरा बस दुर्घटना: ज्यान गुमाएका १८ जना मध्ये १० जनाको सनाखत
काठमाडौं । डडेल्धुराको केआई सिंह राजमार्गको रडुवा खोलामा हिजो साँझ भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १८ जना […]
काठमाडौं । जेष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात् निर्जला एकादशी। तुलसीको दल(बिउ) राख्ने दिन। यो दिन छरिएको बिउ एक […]
मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रद्वारा मङ्गलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित संविधानको कार्यान्वयन:राष्ट्र र पार्टी […]
नाइजेरियाविरुद्ध मेस्सीले गरेको गोल यस विश्वकपको १०० औं गोल
काठमाडौँ । लियोनल मेस्सीले जारी विश्वकपमा १०० औ गोल गरेका छन् । लियोनल मेस्सीले गोल […]